ज्यापू समाज समुदाय सरोकार | शहरबाट शब्दहरु
← शहरबाट शब्दहरू शुरू !
धन्यवाद गौथली ! →
Posted on February 25, 2013 by Subin
गत वर्ष ज्यापू समाजको १८औं वार्षिकोत्सव अवसरमा तीन दलका ठूला नेता विशेष अतिथि थिए । कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष्ँ नरबहादुर कर्माचार्य, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतको उपस्थिति थियो ।
तर, समारोहमा आकर्षणका बिन्दु बनेका थिए– ६८ वर्षीय अष्टमान महर्जन । अष्टमानले ज्यापू समाजलाई झन्डै ४ करोड रुपियाँ सहयोग गरे । उनले समाजलाई बागडोलस्थित १ रोपनी १३ आना जग्गा र ५० लाख नगद सहयोग गरेका हुन् । समारोहमै उपस्थित ठूला दलका प्रमुख नेताले आ–आफ्नै भाषामा अष्टमानलाई दानवीर भनेका थिए ।
समाज सेवामा यति ठूलो सहयोग गर्ने अष्टमानले यो सहयोगमा आफ्नो एकलौटी निर्णय नभएको बताए । ‘परिवारसँगको सल्लाहपछि मैले यो सहयोग गरेको हुँ’, उनले भने– ‘समाजले गरेको केही कामबाट प्रभावित भएर सहयोग गरेको हुँ । समाजले वृद्धाश्रम खोल्ने कुरा छ । पछि, वृद्धाश्रममा रहेर समाजसेवा गर्ने इच्छा छ ।’
ज्यापू समाजका निवर्तमान अध्यक्ष रामकाजी अवालेले अष्टमानले निकै ठूलो गुण लगाएको बताए । निवर्तमान रामकाजी अवालेको कार्यकालमा नै अष्टमानले सहयोग गरेका हुन् ।
हाल अष्टमानले दिएको बागडोलस्थित जग्गामा वृद्धाश्रमका बन्ने भएको छ । गत ४ फागुनमा वृद्धाश्रमको शिलान्यास गरिएको छ । वृद्धाश्रम पहिलो चरणमा दुईतले बनाइने समाजले जनाएको छ । ‘४४ शैय्याको बनाउने लक्ष्य समाजले लिएको छ’ –समाजका अध्यक्ष मंगल महर्जनले भने । वृद्धाश्रम अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुने महर्जनले बताए । ‘हामीले आधुनिक बनाउनेतर्फ कुनै कम्प्रमाइज गर्ने छैनैँ’, उनले भने– ‘भवनभित्रै वृद्धवृद्धाका लागि बाँकी जीवन आनन्दमय, शान्ति र सुख मिल्ने वातावरण निर्माण गर्नेछौं ।’
घुम्ने स्थल, भजनकिर्तन, साहित्य सम्मेलन र योगा गर्ने सुविधा उपलब्ध हुने उनले जनाए । भवनमा विभिन्न हलको समेत स्थापना हुनेछ ।
वृद्धाश्रम परिसरबाट सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँ वैष्णोदेवी र ब्र≈मायणी पीठ पनि रहेका छन् । पूर्वअध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले अब बन्ने वृद्धाश्रम मोडल होमको रूपमा विकास हुने बताए । ‘यो अपांगमैत्री शैलीमा निर्माण हुनेछ’, उनले भने– ‘भवनमा कलात्मक शिल्पकलाको सुन्दरतासमेत समेटिनेछ । यहाँ तिकी झयाः र झिँगटीको सौन्दर्यता रहनेछन् ।’ समाजले १९औं वार्षिकोत्सवमा करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा परम्परागत एवम् कलात्मक नेपाली शैलीको ज्यापू प्रज्ञा भवनको स्थापना गरिसकेको छ । भवन ४ करोड रुपियाँको लागतमा बनेको हो ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भवनको उद्घाटन गरेका थिए । यसलाई समाजले एउटा कोसेढुंगाको रूपमा लिएको निवर्तमान अध्यक्ष रामकाजी अवालेले बताए । ‘नेवारी परम्परा, संस्कृति, भाषा, धर्म, कला तथा रहनसहनलाई सुरक्षित तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ज्यापू प्रज्ञा भवन स्थापना गरिएको हो’ –उनले भने । भवन च्यासलस्थित भोलगणेशस्थानमा रहेको छ । जातीय संग्रहालयका रुपमा ज्यापू एकेडमी रहने पनि अध्यक्ष अवालेले जनाए । ‘प्रज्ञा भवनलाई ललितपुर नगरको एक सम्पदास्थलमा सूचीकृत गर्ने योजनामा छौं’, उनले भने– ‘सँगसँगै यसलाई पर्यटकीय रुपमा पनि विकास गर्र्दै लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ ।’
This entry was posted in मेरो लेख. Bookmark the permalink.
One Response to ज्यापू समाज समुदाय सरोकार